မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ | ShweProperty.com
Get Property Alert By Email
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်မြို့နယ် ဓမ္မက၀တီလမ်း တွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
့Hall , ကြွေခင်း , wc မိသာစု နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည် ...
့Hall , ကြွေခင်း , wc မိသာစု နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည်
Listed 20 September 2019
Advertiser : စည်သူ
Property ID: S-1203790
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်မြို့နယ် ဇေယျသုခလမ်း တွင်တိုက်ခန်းရောင်ရှိပါသည်။
Hall , ကျွန်းပါကေး , Ac-1 , ကုတင် , အ၀တ်လျှော်စက် ,ရေခဲသတ္တာ , ဘိုထိုင်အိမ်သာ အလုံစုံပြင်ဆင်ပြီးသော တိုက်ခန်း ဖြစ်ပါသည်။…...
Hall , ကျွန်းပါကေး , Ac-1 , ကုတင် , အ၀တ်လျှော်စက် ,ရေခဲသတ္တာ , ဘိုထိုင်အိမ်သာ အလုံစုံပြင်ဆင်ပြီးသော တိုက်ခန်း ဖြစ်ပါသည်။…
Property ID: S-1204274
ရောင်းရန် - 19’ x 54’ ၊ မြေညီ(ထပ်ခိုးပါ)၊ မေတ္တာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ
19’ x 54’ ၊ မြေညီ(ထပ်ခိုးပါ)၊ မေတ္တာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ ရောင်းမည် 3000သိန်း(ညှိနှိုင်း) *ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်*…...
19’ x 54’ ၊ မြေညီ(ထပ်ခိုးပါ)၊ မေတ္တာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ ရောင်းမည် 3000သိန်း(ညှိနှိုင်း) *ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်*…
Listed 19 September 2019
Property ID: S-1202237
ရောင်းရန် - 15’x50’၊ ၄လွှာ ၊ ဗဟိုလမ်းဒဲ့ပေါက် ၊ စမ်းချောင်း
15’x50’၊ ၄လွှာ ၊ ဗဟိုလမ်းဒဲ့ပေါက် ၊ စမ်းချောင်း ရောင်းမည် 530 သိန်း (ညှိနှိုင်း) • 1SBR • ကျွန်းပါကေးခင်း • သံပန်းဆန်းရှိတ်တပ်…...
15’x50’၊ ၄လွှာ ၊ ဗဟိုလမ်းဒဲ့ပေါက် ၊ စမ်းချောင်း ရောင်းမည် 530 သိန်း (ညှိနှိုင်း) • 1SBR • ကျွန်းပါကေးခင်း • သံပန်းဆန်းရှိတ်တပ်…
Property ID: S-1205779
ရောင်းရန် - Myoe Thit Street (မြို့သစ်လမ်း)
*Location – Myoe Thit Street , Tamwe Town ship. *Price – 420 Lakhs *Property Type — Apartment (4F) *Area — 750 sqft *Rooms formation - 1-Bedroom , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Town ship. ...
*Location – Myoe Thit Street , Tamwe Town ship. *Price – 420 Lakhs *Property Type — Apartment (4F) *Area — 750 sqft *Rooms formation - 1-Bedroom , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Town ship.
Listed 13 September 2019
Advertiser : Htet Aung Shine
Myoe Thit (3) Street (မြို့သစ်၃လမ်း)
Property ID: S-1205508
ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ဗဟိုလမ်းကျောကပ်လမ်း လှည်တန်း ၃ရပ်ကွက်…
2 bed frames,2 open wardrobes,3 nos cupboards,2 nos aircon,storage water heater tank ,Data point ,tv point wall lamps in every bed room,electrical and plumbing in Singapore system. Concrete bench in every room. အခန်းတိုင်းတွင် Wall lamp , Tv point, Data Point , 2ways control…...
2 bed frames,2 open wardrobes,3 nos cupboards,2 nos aircon,storage water heater tank ,Data point ,tv point wall lamps in every bed room,electrical and plumbing in Singapore system. Concrete bench in every room. အခန်းတိုင်းတွင် Wall lamp , Tv point, Data Point , 2ways control…
Listed 1 September 2019
Advertiser : San tun
Property ID: S-1190778
Asking Price : 860 သိန်း
Office no : 09799729406,09421726082
ရောင်းရန် - Natsin Street (နတ်စင်လမ်း)
*Location – Nat Sin Street , Kyee Myin Daing Town ship. *Price – 700 Lakhs *Property Type — Apartment (6F) *Area — 1150 sqft *Rooms formation - 2-bedrooms , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathroom and ready to live located at Kyee Myin Daing Town ship. ...
*Location – Nat Sin Street , Kyee Myin Daing Town ship. *Price – 700 Lakhs *Property Type — Apartment (6F) *Area — 1150 sqft *Rooms formation - 2-bedrooms , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathroom and ready to live located at Kyee Myin Daing Town ship.
Listed 30 August 2019
Natsin Street (နတ်စင်လမ်း)
Property ID: S-1204718
ရောင်းရန် - Dagon Thiri Street (ဒဂုံသီရိလမ်း)
*Location – Thiri Dagon Street , Tamwe Town ship. *Price – 740 Lakhs *Property Type — Apartment (1F) *Area — 960 sqft *Rooms formation - 2-bedrooms , 2-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Town ship. ...
*Location – Thiri Dagon Street , Tamwe Town ship. *Price – 740 Lakhs *Property Type — Apartment (1F) *Area — 960 sqft *Rooms formation - 2-bedrooms , 2-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Town ship.
Listed 24 August 2019
Dagon Thiri Street (ဒဂုံသီရိလမ်း)
Property ID: S-1204510
Asking Price : 740 သိန်း
ရောင်းရန် - မေတ္တာလမ်းမအနီးအသင့်နေဈေးတန်တိုက်ခန်းသစ်
အသင့်နေ,ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Underground Tank,Own Meter,အဝီစီတွင်း,Own…...
အသင့်နေ,ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Underground Tank,Own Meter,အဝီစီတွင်း,Own…
Listed 15 August 2019
Property ID: S-1201059
ရောင်းရန် - သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ် တိုက်အမှတ် - ၁၊ ၄ လွှာ၊ အောင်ဇေယျ (၇)လမ်း၊…
Listed6August 2019
Maung Maung ( Individual…
Advertiser : Maung Maung ( Individual…
Property ID: S-1203771
Office no : 09 452402101
ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် မြရတနာလမ်း ၂၄ ရပ်ကွက် City Mart အနီး ၁၉…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၂၄ ရပ်ကွက် City Mart အနီး ၁၉ ပေ ၅၄ ပေ နေရာကောင်းတိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၂၄ ရပ်ကွက် City Mart အနီး ၁၉ ပေ ၅၄ ပေ နေရာကောင်းတိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်…
Listed2August 2019
Property ID: S-1203656
Office no : 09 252303544 , 09 799554722 , 09 974848138
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို.နယ် ပြည်လမ်းမ ဟံသာဝတီးအ၀ိုင်အနီး တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Hall,အတွင်းလှေခါးပါ,အောက်ထပ်ကြွေခင်း,အပေါ်ထပ် ရှားထိုခင်း , wc-2 စုံ ...
Hall,အတွင်းလှေခါးပါ,အောက်ထပ်ကြွေခင်း,အပေါ်ထပ် ရှားထိုခင်း , wc-2 စုံ
Property ID: S-1202750
ရောင်းရန် - လှိုင်မြို.နယ် မြနန္ဒအိမ်ယာလမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
BR-2 , ကျွန်းပါကေ ,wc , Ac...
BR-2 , ကျွန်းပါကေ ,wc , Ac
Listed 12 July 2019
Property ID: S-1202515
ရောင်းရန် - ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် အမှတ်​ ၂၄၂ဒုတိယထပ်​ ၀ဲဘက်​ ကုန်​​ဈေးတန်းလမ်း…
အိမ်​အ​ရှေ့ အခန်းက ၃ခန်း အိမ်​အလယ်​ အခန်း၃ခန်း ထပ်​ခိုးဠည်း ၃ခန်း။ ​ရေချိုးခန်း၂ခန်း အိပ်​ခန်း အကျယ်​…...
အိမ်​အ​ရှေ့ အခန်းက ၃ခန်း အိမ်​အလယ်​ အခန်း၃ခန်း ထပ်​ခိုးဠည်း ၃ခန်း။ ​ရေချိုးခန်း၂ခန်း အိပ်​ခန်း အကျယ်​…
Listed3July 2019
Advertiser : Htaw Lay
Property ID: S-1201971
Office no : 09255747842
ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် အမှတ် - ၄၂၅ ဘုမ္မာလမ်းမကြီးနှင့်…
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်
Listed 1 July 2019
Advertiser : Yin Yin Aye
ဘုမ္မာလမ်းမကြီးနှင့် ဘုမ္မာ (၉)လမ်းထောင့်
Property ID: S-1201777
Office no : 095421015
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်လမ်းအနီးတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး...
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး
Listed 28 June 2019
Property ID: S-1201657
Asking Price : 1,150 USD
ရောင်းရန် - 12.5’ x 50’ ၊ မြေညီ၊ ပန်းဘဲတန်း
12.5’ x 50’ ၊ မြေညီ၊ ပန်းဘဲတန်း ရောင်းမည် 2400သိန်း(ညှိနှိုင်း) *ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်* • ထပ်ခိုး • မျက်နှာကျက်အမြင့်…...
12.5’ x 50’ ၊ မြေညီ၊ ပန်းဘဲတန်း ရောင်းမည် 2400သိန်း(ညှိနှိုင်း) *ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်* • ထပ်ခိုး • မျက်နှာကျက်အမြင့်…
Property ID: S-1201577
ရောင်းရန် - ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း အရောင်း
For Sale@Thingangyun tsp * Property Type – AP * Square Feet -1250sqft * Master Bedroom - 1 * Single Bedroom -1 * Bathrooms and toilets: * Price -740L...
For Sale@Thingangyun tsp * Property Type – AP * Square Feet -1250sqft * Master Bedroom - 1 * Single Bedroom -1 * Bathrooms and toilets: * Price -740L
YGR Real Estate
Advertiser : YGR Real Estate
Lay Daung Kan Rd
Property ID: S-1201554
Mobile : 09-788600166, 09-788600177, 09-788600188
Office no : 09964516573
ရောင်းရန် - 14’ x 55’ ၊မြေညီ၊သံသုမာလမ်းဒဲ့ပေါက်၊တောင်ဥက္ကလာပ
14’ x 55’ ၊မြေညီ၊သံသုမာလမ်းဒဲ့ပေါက်၊တောင်ဥက္ကလာပ ရောင်းမည် 700သိန်း(ညှိနှိုင်း) **ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်*…...
14’ x 55’ ၊မြေညီ၊သံသုမာလမ်းဒဲ့ပေါက်၊တောင်ဥက္ကလာပ ရောင်းမည် 700သိန်း(ညှိနှိုင်း) **ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်*…
Property ID: S-1201486
ရောင်းရန် - ပဒေသာ လမ်းဆုံအနီး အသင့်နေတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းရန်
အသင့်နေ,ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,Underground Tank,Own Meter,အဝီစီတွင်း,Own…...
အသင့်နေ,ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,Underground Tank,Own Meter,အဝီစီတွင်း,Own…
Property ID: S-1200294
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ ရောင်းရန် Real Estateရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ ကယားပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ချင်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ နေပြည်တော် ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
apartment, for sale in all townships,